Buur-madaw Dib Ha Isu Xisaabiyo ( Abdi-Shotaly) – somalilandtoday.com
Buur-madaw Dib Ha Isu Xisaabiyo ( Abdi-Shotaly)
Buur-madawi ha ogaado, in aanu Xirsi Xaaji Cali ahayn, beenaale iyo xaaraami ku xoog-sadda cinwaan uu isagu samaystay, ee uu yahay nin u soo halgamay shaksinima-diisa, oo aanu sidiisa u baryo tegan Qadaafi, Puntland iyo Afrikadda kale, oo kolba mid gacanta hoos dhiganin, laakiin-se uu yahay nin dal-kiisa iyo dad-kiisa ku kalsoon, oo dadnima-diisa ugu tudhaaya ummad-diisa, xumaan-tana u diidaaya, kana naxaaya, nina aan ugu xeebanayn maamul uu reer-kiisu ka madax yahayiyo mid kale toona, ee ay wadani-nimadu kala weyn tahay sidda uu dhaqmo Odaygan boqorka sheeganayaa. Mana aha af-miishaar ku ceesha munaafaqa iyo dira-diraale, colaad kala dhex dhiga Beelo abid wadda degaanaa, oo
si walba isugu xidhan, bal in aanu wax jira ahayn buurmadawi, wuxu Xirsi ku eedaynayaa maxaad u qortay? Wixii dhabta ahaa, ee aad soo aragtay ama lugta ku soo dhufatay, ee taariikh-diisa ahayd, waayo’aragnimaddii uu soo maray, taas oo uu ka soo helay iyo duruustii soo martay, intii u dhaxaysa wakhtiga uu ku iclaamiyey buugiisa “Miyi Ilaa Madaxtooyadda” Waxan odhan lahaa Buur-madaw dib isu xisaabi, waxad isu haysto maahee, waa sidda laguu yaqaano, malaha wax dadka ka weyn baad isu qaadataye.
Cagtii joogsan waydaa, mar bay ceeb la kulantaaye, bal ha soo ban-dhigo taariikh-diisa, oo aan ahayn kolba jeel iyo xadhig uu ku galo, been iyo xoolo doonimo, waa la og yahay in uu caruur u dhigi jiray qu’raan, ka dibna uu caano boodhe isagu isku daadiyey, oo yidhi boqor baan ahaye, waxa uu dadka u sheegayaa ee kale waa maxay? Waxa la yidhi ” labadda xaaraanta ku heshiiyaa, xalaasha bay isku seegaane” Miyaanu ahayn kii beenta ka sheegay askariga, isaga oo iska dhaadhi-cinaaya ka indhaha kala jeedda leh ( waa ka cawaran ee Puntland badhisaabka ka ahe), ee yidhi ciidamadda ha la kala qaado, waxan ku soo heshiinay sidaas, askarta Somaliland ku amar ku taag-laysa’e, dabeed markii uu Hargaysa yimi isna uu xabsiga u taxaabay, taas oo keliya maahee meeshuu is taaqa-ba been iyo wax aan sal iyo raad lahayn buu ka daldalaa, si uu hanti ugu helo, Waad la socoteen iyana in Imaaraadka lagu xidhay, Madax-weyne Siilaanyo uu amar ku dejiyey xadhi-giisa. waxad kale oo aad si wacan ugu dheregsan tihiin, wixii uu samay-naayey ayaamii doorasho ku sheegtii, ee isaga oo af-qabiil ku hadlaaya, macsharadda isla soo taagaayey ” Waxan haysanay kursiga 8 Sano’e, Maye kuwa mucaaridka sheeganayaa?, Haday wax yihiin may saacad qudha na shiidaan? Maxay hadeer la bood-boodayaan? Ninka waxaas ku hadalaayey, baa wax ka sheegaaya Buugga Xirsi Xaaji Cali ” Ilayn nimaan xishoonayn dagaal xeeli kama hayso”. Miyaanu ahayn shirkii Gar-adag, kii lahaa Baabuur baa madaxa laga jaray, oo dawlad gaar ah bay rabaan in ay ku dhawaaqaan, isaga oo doonaaya, in uu sii baadh-baadho Madax-weyne Riyaale, Miyaanu kii uun ahayn aynu naqaanay? Maxaa ku soo koray ee kale? Ma dib baa loo abuuray? saw kii caynaba ka wadhadhac lahaa ee wuxuu doono ku dhurmaayey.
Buugga Xirsi waxa uu ku qorey, waa dhab aan eray been ah lahayn, Siilaanyo amar ilaahay baa ku yimi, oo muu iibsan xanuunka, waxana aan leeyahay illah ha ka dul qaado, oo caafimaad hasiiyo. Waxa uu ku maagayaana maxaad odayggii Siilaanyo wixii ku yimi, aad u kashiftay. Waxan leeyahay oo aan ku soo xidhay qoraalkan, xaqa lama qarin karo oo rabi-geen baa inoogu sheegay qu’raan-kiisa , uu inoo soo dejiyey, sidaas awgeed, wax allaale wixii laga saxeexday isaga oo aanu siilaanyo xis-kiisu dhamayn, waa ka kac iyo biyo col dhaanshay, wax ka socona-yaana ma jirto, oo distoorkii uu inoo dhigay (IHN) Marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal baa waxa ku cad ” Haddii uu is bedelo xuska Madax-weynaha markaa xukunka hayaa, oo ay garashadu ka halawdo, waa in doorsho deg-deg ah la qabtaa” waayo ma maamuli karo dalka, cid aan loo doora-nina laguma aamini karo, ee waa in uu iska nastaa, oo eebbe loo baryaa. Sidaas awgeed, dadkii ku dul shaqaysa-naayey magaciisa, ee hantidda ummadda ku xadaayey, dhamaan-tood waa denbiila-yaal, marka uu wakhtigu fasaxana maxakamad baa la soo saari doonaa, waayo inaka oo aan kaba hadlin buuga Xirsi qorey, qurba-joog iyo qolqol-joog-ba waa la ogaa, in uu odaygu ka xanuunsa-naayo dhanka maskaxdda, oo aanu wax maammuli karin. Ugu damabyn buur-madawi wuxu ku nool yahay khiyaali iyo munaafaqad jeegaaneed, xaqdi iyo beelo gaar ah la colaw, aan geed-na loogu soo gabanin, ee waa in uu af-kiisa xidho, oo xirsi wuxuu galo ama gudo, abidkii ma gaadhaayo’e uu xaal ka bixiyaa, Gole loo dhan yahay, maaha in lagu dhaafo waxaas oo kale’e.
N.B Nin Amabday Halkuu Maray Way Ula Ekoonaatay!